﻿	Pizza a na-eme n'ụlọ (Nke a na-eme n'ụlọ ma ọ bụ nke a zụtara n'ụlọ) - Ezi Ntụziaka
esi nri tortellini oyi kpọnwụrụ na a crockpot
esi esi nri achịcha tilapia na stovu
esi kwadebe scallops na imi ihe
Arụrụ n'ụlọ Pizza
Achịcha Pizza a dị elu juputara na anụ anyị kachasị amasị, veggies, na mmesapụ aka na-enyere chiiz gbazee!
Kedu ihe kpatara ịtụ pizza mgbe ọ na-atọ ụtọ ịme n'ụlọ? Pizza kachasị elu nwere ihe niile a na-ewu ewu ị ga-atụ anya ya na enwere ike ime ka eriri ahụ dị gịrịgịrị ma ọ bụ dị ka ọ masịrị gị!
Ntụziaka a na-amalite site na a arụrụ n'ụlọ Pizza jikọrọ ọnụ (na Pizza ihendori !) maka ekpomeekpo kacha mma.
Kasị elu Pizza Toppings
Ndepụta toppings maka pizza kachasị elu nwere ike ịdị iche mana ihe ndị a bụ ọkacha mmasị anyị:
AHA - pepperoni, soseji, salami, ham
VEGGIES - acha uhie uhie, ero, ose, na oliv.
CHEESE - Mozzarella na parmesan tinye nnukwu ekpomeekpo anaghị eme ihere, gbakwunye nza! I nwekwara ike ịga maka ngwakọta Pizza anọ (ma ọ bụ ngwakọta zụtara iji chekwaa oge).
Nnukwu mgbakwunye ndị ọzọ
Gbalịa mee otu n'ime ihe ndị a:
oseose - jalapenos, chili flakes, banana na-ede ede
ohuru - tomato esi, basil, fennel
nke - anụ ehi, anụ ezi anụ Canada (ma ọ bụ anụ ezi)
Oge Sachekwa Ndụmọdụ
Na-achọ ịchekwa oge? Lee ụfọdụ nnukwu ụzọ mkpirisi.
eme nnukwu ogbe pizza pizza mgwakota agwa na ihendori na ifriizi maka Pizza abalị
jiri mgwakota agwa emere (ahịa Italiantali na-erekarị pizza mgwakota agwa)
pre-shredded cheese blends zuru okè na Pizza
Otu esi eme Pizza kacha elu
Kemgbe ụwa, Pizza a na-eme n’ụlọ anaghị adị mfe! Naanị gụọ maka nchịkọta akụkọ nke usoro ahụ!
Kwadebe mgwakota agwa na mgbe ọ na-ebili, prep bekee.
Pizza kacha elu na ihendori, toppings na n'ezie cheese.
Ime ruo mgbe ọ na-ebu nchara ma na-acha aja aja.
Kwe ka Pizza nọrọ ihe dị ka nkeji 10 tupu iberi ma jee ozi, nke a na - egbochi chiiz ka ọ ghara ịmịcha.
Odị :dị: Tupu ịgbakwunye mmanụ na pizza mgwakota agwa ahụ, jiri ihu ọma mee ka elu ma crusts dị elu. A na-akpọ nke a 'nkwụsị' ma na-egbochi nnukwu afụ ịmalite na eriri ahụ. Ọ bụ ihe ọkachamara Pizzaiolos mee!
Etu esi echekwa ma kpughee Pizza fọdụrụnụ
Ọ dịghị ihe na-atọ ụtọ karịa fọdụrụ Pizza! Ọbụna mgbe oyi na-atụ, ọ dị mma maka nri ụtụtụ ma ọ bụ nri n'echi ya!
Ọ́ gaghị adị mma ma ị tinye nri iberibe nri abụọ ma ọ bụ abụọ n’ime nri ehihie iji kpoo ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ọrụ?
Gbapụta otu iberibe na ngwa ndakwa nri ma ọ bụ oven na-eme ka ọkụ sie ike ruo mgbe agbazee chiiz ọzọ. Maka iberibe buru ibu, ghaa otu mpempe n'otu oge.
More Pizza nwere ihu ọma
Otu esi eme Pizza achicha
Kọlịflawa Pizza jikọrọ ọnụ
Cheesy nri ụtụtụ Pizza
Ngwa na mfe Pizza Bagels
Ndị ezinụlọ gị ha hụrụ Pizza a kachasị elu? Jide n'aka na ị ga-ahapụ ọkwa na ikwu n'okpuru!
5site na4votu NyochaNtụziaka
Pizza kachasị elu
Oge Nkwadebeiri abụọ Nkeji Oge nri30 Nkeji Oge Bilie10 Nkeji Oge zuru ezu1 aka elekere Ọrụ16 Mpekere Onye edemedeHolly Nilsson Ntụziaka Pizza a kachasị elu dị mfe, cheesy, na njikere na 1 awa! Bipute Ntụtụ
▢1 paụnd ụlọ ahịa zụtara pizza mgwakota agwa
▢Ma ọ bụ
▢1 ngaji ifịk yist
▢abụọ teaspoons shuga ma ọ bụ 1 ngaji mmanụ a honeyụ
▢1 iko mmiri ọkụ
▢4 tablespoons mmanụ oliv ekewa
▢¼ ngaji nnu
▢3 ka 4 iko ntụ ọka niile
▢½ iko Pizza ihendori ma ọ bụ nụrụ ụtọ
▢abụọ iko mozzarella chiiz shred
▢abụọ tablespoons parmesan chiiz shred
▢¼ paụnd esi ya soseji ma ọ bụ anụ ehi
▢abụọ ounce pepperoni gbanwere
▢1 ounce salami iberibe, ma obu anu ozo nke ozo dika ichoro
▢¼ iko mgbịrịgba acha uhie uhie ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
▢¼ iko oliv ojii sliced
▢3 tablespoons uhie yabasị sliced
▢abụọ buru ibu ero mẹ iphemiphe ọbule
Kpochapu oven na 425 Celsius F.
Na obere efere, gwakọta yist, shuga, na mmiri. Kpuchie ma hapụ ka ọ dịgide ruo 5-10 nkeji, ruo mgbe afụ na-etolite n'elu.
N'ime nnukwu efere agwakọta, gwakọta achịcha yist, mmanụ tablespoons abụọ, na nnu. Tinye na iko ntụ ọka 3, iko n'otu oge, na-agwakọta mgbe mgbakwunye ọ bụla. Ọ bụrụ na mgwakota agwa dị ka nke nnyapade, tinyekwuo ntụ ọka, tablespoons abụọ n'otu oge.
Ghichaa mgwakota agwa n'elu ala ahuru ala ma kpocha ya rue mgbe o siri ike, ihe dika nkeji isii.
Ọ bụrụ na oge dị, hapụ mgwakota agwa ka o bilie otu elekere. * Ọ bụrụ nhapụ ikwe ka ọ bilie, kpoo ntụ ọka ahụ tupu nzọụkwụ ọzọ.
Mee griiz mmanu pizza abuo na mmanu. Ghichaa mgwakota agwa ma gbatịa iji mejupụta ite. Jiri mkpịsị aka gị pịa ma gbatịa dịka ọ dị mkpa.
Mee ka mgwakota agwa bilie na pans maka nkeji 10. Poke Pizza mgwakota agwa ya na ndu ya.
Ghichaa Pizza mgwakota agwa ya na 2 tablespoons nke mmanụ oliv, na elu ya na Pizza ihendori, toppings, na cheese dị ka achọrọ.
Mee minit 15-18 ma ọ bụ ruo mgbe agbazere chiiz na jikọrọ ọnụ bụ ọlaedo.
* I nwere ike ikwe ka ihe dị ka elekere 1 na-ebili oge maka mgwakota agwa a kama ọ na-abụkarị, m na-awụlị nzọụkwụ a iji mee ngwa ngwa mgwakota agwa. Na-ebili mgwakota agwa ga-agbakwunye ntakịrị ekpomeekpo (ma taa ya).
Calorisị:217,Carbohydrates:iri abụọg,Protein:8g,Abụba:iri na otug,Abụba Ajuju:4g,Cholesterol:22mg,Sodium:356mg,Potassium:Ogbe 114mg,Eriri:1g,Sugar:1g,Vitamin A:219IU,Vitamin C:4mg,Calcium:85mg,Iron:1mg
IsiokwuBest Pizza kacha mma, esi mee pizza kachasị elu, Pizza kacha elu, nri pizza kachasị elu N'ezieNri abalị, Entree, Isi Agụmakwụkwọ, Pizza Esie yaAmerịka, ItaliantalianEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .